iOS 13 ine zviziviso zvinozivisa nezve nzvimbo dziri kumashure | IPhone nhau
iOS 13 ine notices dzinozivisa nezve nzvimbo dziri kumashure
Apple iri kutora chakakomba nezve iyo wega. Kudzora kweruzivo kunofanira kuwira kune vashandisi uye ivo ndivo vanosarudza kunaani uye sei vanoendesa data ravo. Izvo zvakakosha kuti Apple ive muyananisi uyo anopa kutonga kune vashandisi, asi panguva imwe chete iri pachena navo: maapplication anotora data, iwe unofanirwa kuibata. MuIOS 13 basa rakabatanidzwa mune iro a ziviso apo app yave iri kurekodha nzvimbo kumashure mairi inotizivisa kuti ndeapi maapp, nzira yaakachengeta, chinangwa chekuchengetedza kwacho uye isu tine mukana wekuenderera mberi nekutendera kunyoreswa kana kamwe chete.
Kudzora kunyoreswa kwenzvimbo kumashure
Kana iwe uchibvumira echitatu-bato mawebhusaiti kana maapplication kushandisa nzvimbo yako yazvino, uri pasi pemitemo yavo, mutemo wepachivande, uye maitiro. Ndokumbirawo muongorore zvirevo, gwara rekuvanzika, uye maitiro emaapp aya kana mawebhusaiti kuti unzwisise mashandisiro enzvimbo yako ruzivo uye rumwe ruzivo.
Iyi snippet inotorwa kubva kuApple's Localization Policy. Mariri tinogona kuverenga kuti kana tikabvumira maapplication kushandisa yedu yazvino nzvimbo isu tiri kubvuma ruzivo rwekushandiswa kunoitwa nemaapps mumamiriro avo. Dambudziko nderekuti nguva zhinji isu hativerenge mamiriro aya uye tinogona kunge tichipa data rakaomarara kune mafomu anogona kunge asingade.
Kubatsira mushandisi, iOS 13 ichave neyekuzivisa system mune iyo system inozivisa mushandisi kuti imwe app yanga ichinyoresa nzvimbo kumashure. Mune ino ziviso, zita rekushandisa rinozoonekwa, chikonzero cheiyo rekodhi uye zvakare mepu ine mapoinzi ayo akachengeta muchikamu icho anga achimhanya mu "kumashure". Izvo zvakakosha kuti uzive maitiro ekudyidzana neicho chiziviso, Sezvo tichava nezvesarudzo mbiri: dzvanya pa "gara uchibvumira", uye chishandiso chinoramba chichiita zvakafanana kana kudzvanya pa "bvumira chete kana uchishandisa app", izvo zvinongobvumidza iyo app kushandisa nzvimbo yedu patinenge tichishandisa app.
Mufananidzo - 9to5Mac
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » iOS 13 ine notices dzinozivisa nezve nzvimbo dziri kumashure